ဘုန်းကျော်: ဒေါ်စု ဘာလုပ်မှာလဲ?????
ဖခင်ဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဓာတ်ပုံအား ကိုင်ထားပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒီလိုတွေ့ခဲ့ရတော့ မြန်မာပြည်တခုလုံး အမှောင်ထဲနေ အလင်းရောင်ကို တွေ့သလို အားရ၀မ်းသာ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့နေ့ပေါ့ (၁၃၊ ၁၁၊ ၂၀၁၀)
ဒေါ်စုလွတ်လာတာတွေ့ရတော့ အရမ်းဝမ်းသာမိတယ်။ သူ့အသံကိုကြားရတာ တော်တော်အားရှိတယ်။ သူ့ကိုဝိုင်းပြီး ချီးမွမ်းစကားပြောကြတာကို တွေ့ရတော့ မျက်ရည်တောင်လည်မိတယ်။ ၀မ်းသာလို့။ ကျနော် ပိုပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒေါ်စုလွတ်လာတော့ ကျနော်တို့တိုက်ပွဲအတွက် တော်တော်အားရှိသလိုခံစားရတယ်လို့မြင်မိတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျနော်သတိထားမိ၊ တွေးမိတာကို တင်ပြချင်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှ လွတ်ပေးတဲ့ကိစ္စကတော့ ခင်ဗျားတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ..သူ့ကို နိုင်ငံရေးက ကန်ထုတ်လိုက်တဲ့သဘောပါ။ အထာကတော့ ငါတို့ နိုင်နေပြီ နင်...သွားတော့ ဆိုတဲ့ပုံစုံလိုပါပဲ။ ဒါကို ကျနော်က ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ နအဖက ခလေးအတွေးနဲ့လို့...။ သူတို့အထင်ဒေါ်စုက စကားမပြော၊ အုံးနှောက်မရှိ၊ မသွားမလာနိုင်တဲ့ ပိုလီယိုသည်လေးမှ မဟုတ်တာ။ ငြိမ်နေရင်တော့ ကောင်းသားပေါ့ဗျာ။ မပူနဲ့ အခုမှ တိုက်ပွဲက တကယ်စပြီ။ တိုက်ပွဲမှာ ဦးဆောင်မဲ့ခေါင်းဆောင်က အခုမှ ရောက်လာတာပါ။
ကြားရ၊ မြင်ရ၊ တွေ့ရ တာတွေကို ကြည့်ပြီး တခါတလေ မြန်မာတွေဟာ စောက်လုပ်တော့မလုပ်ချင်ဘူး၊ စောက်ပြောတော့ရတယ်လို့ ထင်မိတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒေါ်စုကပဲ တကယ်ကို၊ အနစ်နာခံ၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့။ သူကပဲတစ်ယောက်တည်း ကိုယ်ကျိုးစွန့်တာလား။ သူတစ်ယောက်ပဲ သားတစ်ကွဲ၊ လင်တစ်ကွဲနဲ့ လုပ်ခဲ့တာလား။ အာဏာရှင်စနစ်ကိုတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲမှာ ဒေါ်စုထက်တောင် ကိုယ်ကျိုးစွန့်၊ အနစ်နာခံ လုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေတစ်ပုံကြီးပဲ။ ရိုက်သက်လို့တောင်မကုန်ဘူး။ ဒါတွေကို အဓိကနားလည်ဖို့လိုတယ်။ အားပေးတာလည်း အားပေးတာပေါ့။ စောက်ရမ်းအားပေးသလိုဖြစ်နေတယ်။
ဒေါ်စုကမှ အိမ်ထဲမှာ အိမ်အကူနဲ့ ထမင်း၊ ဟင်း ကောင်းကောင်းနဲ့ ငြိမ်နေနိုင်တယ်။ ထောင်ထဲမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေသွားကြည့်စမ်းပါ။ မေးကြည့်စမ်းပါ။ ဘယ်လိုနေရ၊ ထိုင်ရလဲဆိုတာကို။ ဒါလား ဒေါ်စုက...အနစ်နာခံ၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့်ခံ...သူတစ်ယောက်တည်း လုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးနော်..။
ဒေါ်စုကိုချီးမွမ်းလေ သန်းရွှေ တင်း,လေပဲ
ဒီလိုဖြစ်လေ ဗိုလ်သန်းရွှေ နဲ့ အပေါင်းအပါတွေ ထိုင်ရမလို၊ ထ,ရမလို ဖြစ်နေမယ်လို့တွေးမိတယ်။ ဒေါ်စုက အိမ်မှာ ထိုင်နေရင်းနဲ့ နာမည်က ကြီး၊ ဂုဏ်သတင်းကကျော်ဇောဖြစ်လေ၊ နအဖလူတစ်စုက နှာကောက်လေပဲ...မနာလိုဘူးပေါ့..။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေကလည်း နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲလို့ သူ့ကိုယ်သူ သတ်မှတ်ထားတယ်။ ဒေါ်စုကလည်း ပြည်သူလူထုရဲ့ အကြီးအကဲလို့ သူ့ကိုယ်သူ သူ သတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုမျိုး ဒေါ်စုကို မီဒီယာနဲ့ ပြည်သူက အားပေးလေ..ဗိုလ်သန်းရွှေနှင့်အဖွဲ့က မနာလိုလေ...ချောင်းပြီး ရိုက်ချင်လေပဲ...။ သတိထားကြအုံး ဒေါ်စု ရှောသွားအုံးမယ်။
ဒီနေရာမှာ ဒေါ်စုမရှိတော့ရင် ဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရှိတယ်။ အဖြေကတော့ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ နောက်မှာတက်မဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေလာလိမ့်မှာပါ။
ဒေါ်စု အခု ဘာလုပ်မှာလဲ
အသက်က ၆၅-နှစ်။ နိုင်ငံရေးကို ဦးဆောင်နိုင်သေးတယ်။ စဉ်စားနိုင်သေးတယ်။ နောက်ထပ် ၅-နှစ်ထိပေါ့။ အသက် ၇၀-ဆိုရင်တော့ သိတဲ့အတိုင်း အနည်းဆုံးတော့ မေ့,တက်တယ်။ စစ်အစိုးရ ၅-ရက်လောက်လွှတ်ပေး၊ ထောင်ချောက်ဆင်၊ အကြောင်းအမျိုးအမျိုးပြပြီး ငါးနှစ်လောက်ဖမ်းထည့်လိုက်ပြန်လည်း ဒုက္ခ။ ဆိုတော့ ဒေါ်စုအပေါ် မှီခိုမှု သိတ်မကြီးကြနဲ့...။ ကိုယ့် အလုပ်ကိုကိုယ်ဆက်လုပ်ရမှာပဲ။ တခါတလေ NLD ကလူတွေကလည်း ဖင်ခေါင်းအရမ်းကျယ်တယ်။ မျှောက်တာ တအားများတယ်။ သူတို့ခေါင်းဆောင်တွေကို ဘုရားထင်နေလားမသိဘူး။
ဒေါ်စုရဲ့နှစ်ပေါင်း ၂၁-အတွင်းမှာ ၁၅-နှစ်က အိမ်ချုပ်။ ၅-နှစ်က အပြင်မှာ။ တစ်နှစ်က ဘုရားခန်းမှာ တရားထိုင်တယ်။ ကျနော်တို့ လိုချင်တဲ့ တိုင်းပြည်ငြိမ်ချမ်းရေး နဲ့ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အခုထိ မမြင်ရသေးဘူး။ ဒီပေတံနဲ့ပဲ ဒေါ်စုဟာ ဘယ်လောက် တိုင်းပြည်ကို အလုပ်အကျွေးပြုလဲဆိုတာကို တိုင်းရမယ်လို့ယူဆတယ်။ ဒါက တကယ်လက်တွေ့ကြတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဒေါ်စုကြောင့် နိုင်ငံတကာက မြန်မာပြည်ကို ပိုသိလာတယ်လို့ ဘာညာသာရကာ လာမရွှီးနဲ့ ။ သိတော့ ဘာဖြစ်လည်း ဗိုက်ဝလာတာလား။ ပိုက်ဆံရလာလား။ ပြည်သူတွေ ချမ်းသာလာတာလား။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်ဖွဲ့တဲ့ အစိုးရတစ်ခု အမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်ပါစေ။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Sunday, November 14, 2010
Ya...I support your idea. Our people are always like that. We support her. We should work together with her. But don't make fully rely on her. We have to try ourselves too.